AMP plug-in miaraka amina lisitry ny lisitry ny live AMP - MG
flash_auto Mamorona pejy AMP
AMP plug-in miaraka amina lisitry ny lisitry ny live AMP
(!! Nofoanana vetivety !!)
Ny mpamokatra Accelerated-Mobile-Pages (AMP) amin'ny famoronana pejy Google AMP , ny plugins AMP ary ny mpamorona tag AMPHTML dia mampiasa ny lisitry ny lisitry ny AMP mivantana ary manetsika ho azy ny fanavaozana data mivantana amin'ny lafiny AMP tsirairay avy.
<amp-live-list> -Tag fampidirana
Ny Generator Mobile pages Generator dia mihazakazaka mamorona kinova AMP miaraka amina fiasa fanavaozana lahatsoratra mandeha ho azy amin'ny fampiasana ny tag <amp-live-list>. Amin'izany fomba izany, ny tranokala AMP rehetra dia manana karazana fiasan'ny bilaogy mivantana.
Raha mijery ny kinova amin'ny tranokala AMP ny mpampiasa iray ary misy fisehoan-javatra vaovao ho an'ity pejy AMP ity mandritra izany dia eken'ny pejy AMP fa misy kinova vaovao sy vaovao kokoa.
Ny pejy AMP dia mampandre ny mpampiasa ny fanavaozana ny lahatsoratra efa eo am-pamakiana, raha tsy mila mamerina ny pejy AMP ny mpampiasa!
Misy bokotra aseho amin'ny mpampiasa noho io antony io. Raha tsindrio ny mpampiasa ny bokotra fanavaozana ny lahatsoratra AMP, dia miakatra avy hatrany ny kinova AMP amin'ny haingam-pandeha AMP mahazatra! Io dia mamela ny fotoana famoahana fohy kokoa noho ny famerenana indray tanteraka ary mitazona hatrany hatrany ny toetr'andro ho an'ny mpampiasa. Ohatra, ny tickers mivantana dia azo alefa amin'ny AMP.
Ny Accelerated Mobile Pages Generator dia mamorona pejy AMP izay mandefa fangatahana amin'ny mpizara pejy AMP (ohatra ny mpizara Google) isaky ny 16 segondra ary manamarina raha misy kinova lahatsoratra vaovao misy. Raha misy kinova lahatsoratra vaovao dia aseho amin'ny pejy AMP fampandrenesana fanavaozana AMP amin'ny mpampiasa ny endrika bokotra fanavaozana ny lahatsoratra.